Deeqda Kaydka Tababarka iyo Waxbarashada BC
Dawladda BC hadda waxay siinaysaa deeq kayd hal-mar ah oo dhan $1,200 dhammaan carruurta BC da’da udhaxaysa 6 iyo 9 sanno jirka ah. Si aad u hubiso inaad hesho lacagtan bilaashka ah, ilmahaagu waa inuu lahaado xisaabta RESP. Ma aha inaad wax lacagtaada ah dhigto xisaabta RESP si aad lacag uga hesho Dawladda BC. Haddii ilmahaagu uqalmo Bondka Waxbarashada Canada (Canada Learning Bond), waxaad ku heli kartaa laba deqqoodba bilaash!
Ilmahaagu Ma Heli Karaa Deeqda BC?
Dhammaan carruurta dhalatay taariikhda ama kaddib Janaayo 1, 2006, ee waalidkooda ama wakiilkooda sharciga ah ku nool yahay BC waqtiga codsiga wuu heli karaa deeqda BC.
Sidee Ayaan Ku heli Karaa Ilmahayga Deeqdiisa BC?
Si aad u hesho deeqda BC, furo xisaabta RESP oo ah meesha ay Dawladdu ku soo shubayso lacagta. Dabeedna ka dalbo deeqda BC bixiyahaaga RESP marka uu ilmahaagu noqdo 6 jir. Waa inaad dalbato kahor inta aanu ilmahaagu gaadhin 9.
Miyey SmartSAVER Iga Caawin Kartaa Deeqda BC?
Haa! Dalbak onlayn ee SmartSAVER wuxuu kaa caawin karaa dalbashada Bondka Waxbarashada Canada (Canada Learning Bond) iyo deeqda BC. Anwadaagayaasha baankayaga ayaa hadda isu-diyaarinaya deeqda cusub. Waanu la soconaa horumarkooda oo waanu kula soo xiriiri doonaa haddii ay jiraan tallaabooyin dheeraad ah oo loo baahan yahay si loo hubiyo in ilmahaagu helo deeqda BC ee bilaashka ah.
Ka Warran Haddii Ilmahaygu Hadday Yahay 9 Sanno Jir?
Dawladda BC waxay u kordhisay taariikhda kamadanbaysta ee dalabka carruurta ay soo dhawdahay dhalashadooda 9aad. Ka fiiri halkan liistada kamadanbaysta dalabyada.
Deeqda Kaydka Waxbarashada Boqol-jirka ee Alberta - waxay dhammaatay Julaay 31, 2015